မအလတို့ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက် မတ်မတ်သွားနေတဲ့ သတိပြုစရာ ဗျူဟာရဲ့ ဦးတည်ချက် | D Daily News
Home Local News မအလတို့ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက် မတ်မတ်သွားနေတဲ့ သတိပြုစရာ ဗျူဟာရဲ့ ဦးတည်ချက်
မအလတို့ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက် မတ်မတ်သွားနေတဲ့ သတိပြုစရာ ဗျူဟာရဲ့ ဦးတည်ချက်
ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်၊ မအလတို့ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက အခုထိ တစိုက် မတ်မတ်သွားနေတဲ့ ဗျူဟာ ကို ပြောချင်တာရယ် …
သြဇီနဲ့ စကားပြောတော့ ဒုချုပ်စိုးဝင်း က ပိ တ် ဆို့မှုတွေကို အလေးမထားဘဲ အရင်ကလည်း အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သလို မိတ်ဆွေနိုင်ငံအချို့နဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်သွားမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ကမ္ဘာမှာ အဲဒီလိုနိုင်ငံကို တံခါးပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးတဲ့ အထီးကျန် နိုင်ငံတွေလို့ ခေါ်တယ်။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ မြောက်ကိုရီးယား ပေါ့။..
မနေ့က ကျုံပျော် ဖြစ်စဉ်ကို အာဆီယံက အဖွဲ့တွေရောက်နေချိန်မှာကို ဖြစ်တယ်၊သတင်းကလည်း ကမ္ဘာကိုတန်းပြန့်တယ်။အခုလည်း ဒီမောဆိုမှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ကို လ က် န က် ကြီးနဲ့ထုတယ်၊စာသင် ကျော င်းလို နေရာမျိုးတွေ မီးရှို့ တယ်။အဓိပ္ပာယ်က UN/US/EU မပြောနဲ့ အနီးဆုံး သူ့ကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့…
အာဆီယံဆီကတောင် Legitimacy ရဖို့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့သဘောပဲ။NLD ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိမ်တယ် ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ မဲစာရင်း အတုတွေ လုပ်ပြီးပြီလို့ သိရတယ်။ပြီးရင် NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို နှစ်ရှည် ထော င်ချမယ်။NLD ကို ဖျ က် သိမ်းမယ်၊ ပြီးရင် ၂၀၀၈ ခြေဥကို….
လိုသလောက်ပြင်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကို PR စနစ်ပြောင်းမယ်။ ပြီးရင် PR ရွေးကောက်ပွဲကို YMBA ကနေဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပြီး သမ္မတနေရာကို ကူးမယ်။ ဒါ သူတို့ Road Map … မအလ ဟာ ဒီရက်ပိုင်း ဆပ်ပြာလိုမျိုး ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်တာ ကို လိုက်ကြည့်တ ယ်။အရင်ရက်က ဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်၊ နို့မှုန့် တွေကို..
မြဝတီဘက်ကနေ အဝင်ပိတ်တယ်။ ⁉️ ဘာကြောင့်လဲ? တကယ်တော့ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ၂၀၁၀-၂၀၂၁ ကြားကာလနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေကို အင်တို က် အားတို က် သုံးခွင့်ရခဲ့တယ်။အခု အထီးကျန် နိုင်ငံဖြစ်ပြီဆိုရင် အရှားပါးဆုံးဟာ နိုင်ငံခြားငွေပဲ၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြားငွေ ကို စစ်ရေးအတွက်၊…
သူတို့ အကျိုးစီးပွား အတွက် ဆက်သုံးရမယ်။အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေကိုအသုံးလျှော့ ပ စ်မှာ။အဓိက ငွေကုန်တာ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ အဲဒီတော့ လော င် စာဆီ ကို မကြာခင် ကန့်သ တ် လာလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာ ခင်ဗျားမှာ ပိုက်ဆံရှိလည်း ခွဲတမ်းနဲ့ပဲ ဝယ်ရလိမ့်မယ်။ ATM တန်းစီသလို ဓာတ်ဆီထုတ်ဖို့ တန်းစီချင် စီရမယ်။…
ATM လိုပေါ့ ခင်ဗျား တန်းမစီချင်ရင်၊ များများ သွားချင်ရင် မှော င်ခို ဝယ်ရမယ်။ ဆီမှော င်ခိုတွေ ပေါ်လာမယ်။အခု ကမ္ဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီး စားနေ၊ ဝတ်နေတာတွေက $ နိုင်ငံခြားငွေ အရမ်းကုန်တယ်၊အဲဒါကြောင့် Import သွင်းကုန်တွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကန့်သ တ်လိမ့်မယ်။ပြီးရင် ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးပါ ဆိုတာ..
ပြန်လာမယ်။အဲဒီတော့ စားသုံးသူ အခွင့်အရေးပျောက်လာမယ်။Product/ Service ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတော့ဘဲ ကောင်းကောင်းညံ့ညံ့ သုံးရလိမ့်မယ်။တကယ့် နိုင်ငံ တကာ MNC တွေက အခုအခြေအနေကြည့်နေတာ၊အကယ်၍ SAC အာဏာတည်မြဲပြီဆို သူတို့ အစိုးရ က Sanctions တွေနဲ့ထုမှာ၊ ထုံးစံအတိုင်း Coca Cola,…
Heineken, KFC … တွေက ပြန်ထွက်သွားမှာ။အဲဒီမှာ Marketing Industry တစ်ခုလုံးပြိုဆင်းသွားမယ်။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Marketing ဆိုတာက ယှဉ်ပြိုင်ဈေး ကွ က် ရှိမှ လုပ်ကြတာ။ကောင်းကောင်းညံ့ညံ့ သူ့ပစ္စည်းပဲ သုံးစရာရှိရင် ဘယ်သူမှ Service/ Marketing မလုပ်ဘူး၊အဲဒီမှာ Digital Markeing ပညာရပ်တွေ၊….
Offline Marketing တွေ မလိုတော့ဘူး၊ နိုင်ငံတကာ Billboard တွေနေရာမှာ တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မ တော်သာ အဖ/ ပြည့်အင်အားဟာ ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည် စတာတွေပဲ နေရာယူလာလိမ့်မယ်။အခု ပညာ တတ်ဆိုတဲ့ White-Collar လူတန်းစား အများစု ဝင်ငွေ/ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၇၀% လောက်…
ပျောက်သွားမယ်။လူတန်းစေ့ ပြန်နေချင်ရင် နိုင်ငံခြားပြန်ထွက် ကြရလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ငွေသုံးတာ အဲဒီလူတန်းစား၊သူတို့ဆီက cashflow ရပ်ပြီဆို ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊စားသောက်ဆိုင်တွေ၊Online Shopping တွေ အကုန်မျိုး က န်းသွားမယ်။ငွေ မသုံးနိုင်တော့ဘူးလေ။အစစ အရာရာ ခြိုးခြံချွေတာမှဆိုတဲ့..
ဘဝ ကို ခင်ဗျားနေ့စဉ် သွားရမယ်။Personal Development, Entrepreneur စွန့်ဦးတီထွင် ဆိုတာတွေ အကုန်လစ်၊ တတ်ဖို့ထက် “ကပ်” ဖို့ပဲ လိုတဲ့ခေတ်မှာ ပညာရှင်/ ပညာတတ်တွေ မရှင်သန်နိုင်ဘူး။အဲဒီအတွက် MBA လို Higher Level Education တွေလည်း ဈေးကွက်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။….
အထည်ချုပ်လို အရေးပါတဲ့ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွေ ပိတ်ပြီးထွက်လိမ့်မယ်။ဆင်းရဲမွဲတေမှု က တွန်းပို့ရင် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင် အခုပါရမီလမ်းပေါ် သွားကြည့်၊ မြင်ရခဲသွားတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း လမ်းပေါ်အပြည့် ပြန်ရောက်နေပြီ။မအလ ဟာ အဲဒီလမ်းကို တကယ်သွားနေတာနော်၊…
အလုံးစုံ ပျ က် သု ဉ်းရေး၊ အထီးကျန် နိုင်ငံ တကယ်သွားနေတာ။⁉️ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်လား သူအောင်မြင်နိုင်လား? ဆိုရင် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကန့်သ တ် ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ၁၀ နှစ်ပွင့်လင်းထားတဲ့ နိုင်ငံကို ချော က် ထဲပြန် ဆွဲ ချလို့ မရဘူး။အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်၊ င တ်တဲ့သူင တ် ဖြစ်လာရင်…
သူေသ ကိုယ်ေသ ထ ချတဲ့နေ့ ရောက်လာမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေး ဟာ ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုတော့ ရှိတယ် … အာဏာရှင်အောက် ရသမျှလည် ပတ်ကြည့်မယ် ဆိုပြီး တော်လှန်ရေး ကို လျှော့တဲ့သူ များရင် တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ဖို့ အရမ်းကြာသွားမယ်။သို့မဟုတ်…
NUG, PDF လည်း အချိန်တန် အားနည်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်လို့ င တ်တဲ့ တစ်နေ့ကျ ထချကြဦး မှာပဲ။အဲဒီကျမှ ဆိုရင် အ ထိ အခို က် အကျအဆုံး ဒီထက် အများကြီးပိုများလိမ့်မယ်။NUG ရော၊ ပြည်သူရော လုပ်လို့ရသမျှ အကုန်အခုအချိန် အားထည့်ပြီး လုပ်ရင် တော်လှန်ရေးဟာ…
အောင်မြင်နိုင်ချေ၊ အထိ အခို က် နည်းနိုင်ချေ အများဆုံးပဲ။တော်လှန်ရေး က လုပ်တဲ့သူတွေ လုပ်လိမ့်မယ်၊ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဆိုပြီး ကိုယ့်အတ္တတစ်ခုတည်းနဲ့ Personal Development နဲ့ ကိုယ့် စီးပွားရေး ကိုပဲ လှိမ့်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ရှိလာပြီ။….
အဲဒီလိုလူတွေ များလာရင် တော်လှန်ရေးဟာ မှုန်ဝါးသွားလိမ့်မယ်။အဲဒီကျရင် မအလ ပေးတဲ့ ဒု က္ခ တွေဟာ ကိုယ့်အိမ်တံခါးဝ ရောက်လာမှာပဲ၊ နေသာသလို နေရင်း တော်လှန်ရေးကြီး ဘယ်တော့ အောင်မြင်မှာလဲ Facebook ပေါ် တက်ရှာနေလို့တော့ မရဘူးရယ်
Previous articleမင်းတို့ မအလ တွေ လွန်လွန်းတယ် ဆရာတော်လည်း မနေရဘူး
Next articleပြီးရင် GZ လုပ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲဦးမယ် သေချာကြည့်သွား တရားခံပေါ်ပြီ(ရုပ်သံ)